त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक्सरे मेसिनले सुन किन देख्दैन? - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
दीपक खरेल चैत २७
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्स-रे जाँच गरिँदै
वैदेशीक रोजगारीका लागि मलेसियाबाट फर्केका तीन युवाका ८ झोला २०७५ चैत ४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा र भन्सार दुवै पार भएर आएका थिए।
ती झोलामा तस्करीका २ हजार १ सय ६९ बट्टा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका चुरोट थिए।
सुनसरी गढी नगरपालिकाका कमलनारायण विश्वास धुम्रपानका अम्मली होइनन्। प्रहरीले विश्वासका साथबाट ३ सय ३४ बट्टा चुरोट बरामद गरेकाे छ।
मलेसिया एयरलाइन्सको सोही दिनको उडानबाट फर्किएका यात्रु मोरङ कटाहरीका शैलेन्द्र माझीका साथबाट ९ सय ८० र नुवाकोट थानापतीका प्रकाश थपलियाका साथबाट ८ सय ५५ बट्टा विदेशी चुरोट फेला पर्‍यो।
विमानस्थलका सबै चेकजाँच पार गरेर बाहिरिएका उनीहरुको साथबाट बरामद चुरोटको अनुमानित बजार साढे दुई लाख रुपैयाँ बढी हो।
‘उनीहरुका झोलामा चुरोट र केही थान कपडामात्र थियो’, घटनाको प्रारम्भिक कारबाहीमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यो घटनाले विमानस्थल सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यत्रा झोलाहरु कसरी एक्सरे पास भए, कसरी चेकजाँच गरियो, चुरोटको साटो अन्य वस्तु हुनसक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ?’
घटनालाई बुझेका ती अधिकारीको बुझाइ छ, ‘केही हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभनमा तीनैजना भरिया बनेका हुन्, र भन्सारमा समेत केही सेटिङ भएकाे हुनुपर्छ। तर विमानस्थल सुरक्षाका लागि यो डरलाग्दो दुर्घटनाको पूर्व संकेत हो।’
चुरोट रहेका झोलाहरू
चैत्र २१ गते ४ जना भारतीय तीन करोड रुपैयाँ बराबरको सुनसहित विमानस्थल बाहिरबाट पक्राउ परे। थाई लायन एयरलाईन्समार्फत बैंककबाट आएका जतिन जैन, सुनिता, सरिता जैन र बबिता गर्ग राजस्थान, भारतका हुन्। उनीहरु सुन तस्करी गिरोहका नियमित भरिया भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
रोचक पक्ष के छ भने पक्राउ परेका चारै जनाले गहनाको रुपमा सुन ल्याएका थिए। फलामको जलप लगाएर।
‘चारमध्ये तीन महिलाले एक किलो सात सय ग्राम बराबरका गहना लगाएका थिए,’ घटनास्थलमा रहेका प्रहरी अधिकारी भन्छन् ‘पुरुष र महिलाको पहिरन र गहनाको श्रृंगारले शंका गर्ने थुप्रै आधार थियो।’ उनीहरूकाे भन्सार जाँच त गरियाे तर सुन भएकाे पत्ता लागेन।
थाई लायन एयर, फ्लाइट नम्बर एस एल २२० विमानबाट काठमाडौं अवतरण गरेका उनीहरु भन्सार पार भइसकेपछि अहिलेको नयाँ पार्किङमा रहेको थकाली किचेन बाहिरबाट पक्राउ परेका हुन्। उनीहरुलाई बैंकक घुमफिर र केही हजार रुपैयाँ दिएर भरियाका रुपमा प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसबाहेक शरीरमा लगाएर सुन तस्करी गरेको आरोपमा दैनिक जसो प्रहरीले सुनसहित भरिया पक्राउ गरिरहेकाे छ।
मेसिनले किन देख्दैन सुन?
विमानस्थल भन्सारले आगमन कक्षमा ७ र कार्गोका लागि २ वटा आधुनिक एक्सरे मेशिन प्रयोग गर्छ। यी मेशिनले आगमन हुने यात्रुका सरसामान जाँच गर्छ। एक्सरेले झोलाभित्र केही शंकास्पद वस्तु देखाए रेडियो अपरेटरले खोलेर हेर्छन्। शंका लागे शरीर पनि तलासी लिन्छन्।
यो बाहेक जाँचका लागि खटिएका भन्सार अधिकारीले तस्करीका नयाँ–नयाँ शैली अपनाउने यात्रुका लागि सधैँ चनाखो र सजग हुने निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका हुन्छन्। तैपनि पछिल्लो समय भन्सारको एक्सरेले सुनसहित तस्करीका बहुमुल्य सामग्री नदेखेका घटना बाक्लो हुन थालेका हुन्।
‘मेटल डिटेक्टर, एक्सरे र मान्छेलाई झुक्याउन तस्करले अनेकन उपाय उपयोग गर्छन्’, विमानस्थल भन्सार प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘भन्सार अधिकारीलाई बाठा र चलाख तस्करले झुक्याउँदा यस्तो भइरहेको हो।’
विमानस्थल बाहिर बरामद सुन
बिग्रिरहने एक्सरे मेसिन
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २० पुस २०७३ मा विमानस्थल बाहिरबाट साढे ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो। यो घटनामा विमानस्थल भन्सारका तीन जना रेडियो अपरेटर पनि पक्राउ परे। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्याम च्वामु श्रेष्ठ अहिले निलम्बन छन्। उनीहरुबिरुद्ध अख्तियार समेतले विशेषमा मुद्दा चलाएको छ। यो घटनाले तस्करीका घटनामा भन्सार कर्मचारीको संलग्नतालाई पुष्टि गर्दछ।
यी तीनैजनाले तस्करसँगकाे सेटिङमा सुन बाेकेका भरियाकाे झाेला बिना कुनै राेकटाेक पास गराउथे। सुनका भरियाका लागि एक्सरे मेशिन बिगारिन्थ्याे। भन्सारमा करारमा रहेका रेडियाे अपरेटरकाे तस्करीमा संलग्नता भेटिएपछि करार सबैलाइ हटाइएकाे थियाे।
भन्सार कार्यालयसँग एक्सरे मेशिन सञ्चालनमा लागि दुई जना स्थायी रेडियो अपरेटर छन्। यी दुई बाहेक सबै २४ जना सात दिने तालिम लिएकाहरु हुन्। उनीहरु आलोपालो ड्युटीमा खटिन्छन्।
विमानस्थल आगमन कक्षमा एकै ठाउँमा ७ एक्सरे मेशिन सञ्चालनमा छन्। यी मध्ये २ नियमित चलिरहेका छन्।
पाँच वटा मेसिन धेरै समय बिग्रिरहने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उपसचिव ध्रुब विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘प्राविधिक वस्तु हो त्यो बिग्रिरहन्छ, कहिले चल्छ, कहिलै चल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मर्मत सेवा दिनेलाई बोलाएर मर्मत गर्छौं। अनि फेरि चलाउँछौं।’
‘आगमन हुने यात्रुको सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उपसचिव विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हेर्दाहेर्दै कहिले कहीँ कोही फुत्किहाले अर्को निकायलाई खबर गर्ने गरेका छौं।’
उनकाअनुसार एकै पटक ४ वटा विमान अवतरण भए त्यसको असर भन्सारमा पनि पर्छ। एक्स–रे कर्मचारीलाई मेसिन सञ्चालनबाहेक अरु कामको जिम्मेवारी हुने उनी बताउँछन्।
‘कर्मचारीलाई अन्य काममा समेत लगाउनु पर्छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘४ वटा फ्लाइट एकसाथ आएको अवस्थामा यात्रु चापले सहजीकरण गर्दा भन्सार छलीका घटना हुनसक्छ।’ उनको बुझाइमा औपचारिक तालिमको भरमा एक्सरे मेशिन चलाउने जनशक्ति पनि भन्सार छलीको अर्को कारण हो।
हालसम्म पाँच पटक गरी ४० कर्मचारीले सातदिने रेडियो अपरेटर तालिम लिएका छन्। ती मध्ये १६ जनाको सरुवा भइसकेको छ। २४ जना कार्यरत छन्।
प्रकाशित २७ चैत २०७५, बुधबार | 2019-04-10 19:17:44